Momba anay - Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD
YUCERA dia manana ekipa teknika matihanina matanjaka, 60% ny mpikambana ao aminy dia manam-pahaizana biolojika zokiny matihanina ary manam-pahaizana manokana momba ny CNC. Ary koa, YUCERA dia miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana sinoa malaza maro hampahafantatra ny teknolojia famokarana mandroso avy any an-toerana sy any ivelany.
Yurucheng dia manangana fiaraha-miasa amin'ireo ivon-toeram-panodinana nify lehibe sy hopitaly am-bava, mahazo fahombiazana miavaka eo an-kianja ary mahazo teknisiana sy marary marobe.
Ny vokatra lehibe anananay dia ny vavahady zirconia nify seramika, ireo fitaovana mifandraika amin'ny CAD / CAM, fitaovana fanontana 3D ary vokatra hafa mifandraika amin'ny nify. Amin'ny maha mpamatsy fitaovana am-bava matihanina antsika dia afaka manome fitaovana nify nomerika, fitaovana nify ary vokatra sy serivisy nomerika feno izahay.
Toro lalana fampandrosoana
Mampivelatra ny tsena iraisam-pirenena, manolo-tena izahay hivoatra ho lasa fitaovana tsara tarehy fitaovana nify nomerika nify.
Ny fivoarantsika dia nateraky ny fikatsahana asa tsy miato sy ny fanavaozana tsy miato.
1. Nanangana fiaraha-miasa amin'ny ivon-toeram-panodinana nify lehibe sy hopitaly am-bava i Yucera, mahazo fahombiazana miavaka eo amin'ny sehatra ary mahazo teknisiana sy marary marobe.
2. Efa nandalo ny fanamarinana CE sy ISO izahay.
Tongasoa eto amin'ny hevitra rehetra
Ny fiofanana dia taranja fototra ho an'ny mpikambana rehetra ary handamina fiofanana isan-karazany izahay hanampiana anay hanatsara ny fahaizantsika ary Andao hizaha ny hakanton'ny fiainana. Sarobidy amintsika ny fotoana ianarantsika sy iarahantsika mianatra.